Voampanga ho nanao asan-jiolahy… : nalefa eny Tsiafahy ilay polisin’ny Sag | NewsMada
Voampanga ho nanao asan-jiolahy… : nalefa eny Tsiafahy ilay polisin’ny Sag
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ny polisin’ny Sag iray sy ny rainy, ny asabotsy teo. Voarohirohy amin’ny fanafihana sy ny fikambanan-jiolahy izy ireo. Nahitana andiana polisy tonga ihany koa teny amin’ny fitsarana Anosy, somary nampatahotra ny olona ny fahitana azy ireo.
Any Tsiafahy avy hatrany no nalefan’ny mpitsara mpanao famotorana teny Anosy ny polisin’ny Sag iray sy ny rainy, ny asabotsy teo, rehefa avy nalaina am-bavany.Voarohirohy amin’ny asan-jiolahy izy ireo, ary miandry ny fotoam-pitsarana azy. Nandritra ny fitondran’ny zandary ity polisin’ny Sag ity teny amin’ny fitsarana Anosy, nisy andiana polisy maromaro nanao fanamiana mpitandro filaminana sy fanamiana sivily tonga teny an-toerana nanaraka ny fizotry ny raharaha. Araka ny filazan’ny mpitory, rehefa lasa ny fiaran’ny zandary nitondra ilay polisin’ny Sag nakeny Tsiafahy, nitangorona teo aminy ireo polisy ary nandrahona azy tamin’ny alalan’ny fihetsika. Voalaza fa mbola naka sary ilay niharam-boina ny sasany, kanefa niala teny an-toerana rehefa nilaza ilay vehivavy fa tsy manan-jo haka sary azy ireo polisy ireo. Tsy fantatra mazava, araka izany, izay tian’ireto andiana polisy ireto hahatongavana. Azo heverina fa niteraka horohoro ho an’ny mpitory ny trangan-javatra, ka manainga ny tompon’andraikitra ambony mba hijery akaiky ity raharaha ity.
Raha tsiahivina ny raharaha, ny 27 hifoha 28 jolay teo, nitrangana fanafihana tao amin’ny tokantrano iray tany amin’ny fokontany Sandravola Ampanefy Atsimondrano. Voalaza fa jiolahy maromaro ary nisy nitondra basy tamin’ireo. Voarahona ny tao an-trano ary nisy ny niharan’ny herisetra tamin’izany. Ny marain’ny fanafihana, nampandre ny zandary ireo voatafika ary nitondra alika mpitsongo dia ny mpanao famotorana. Rehefa narahina ny fitsongoana dia nataon’ilay alika, niafara tao amin’ny tranon’ity polisin’ny Sag, izay eny amin’ny fokontany ihany. Nosavaina ny trano, nahatrarana fitaovam-piadiana sy entana mampiahiahy tao amin’ilay polisy. Nosamborina avy hatrany izy io sy ny rainy ary nanaovana famotorana, ka izao niafara tamin’ny fampidirana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy izao.
Ny mpitandro filaminana ihany no jiolahy…
Tsy midika akory fa efa olo-meloka ilay polisin’ny Sag sy ny rainy matoa naiditra am-ponja vonjimaika. Miandry ny fitsarana ny raharaha vao fantatra raha meloka izy ireo na tsia. Na izany aza, maneho hatrany ny toe-javatra tahaka izao fa misy tokoa ireo mpitandro filaminana miray tsikombakomba amin’ny jiolahy na tena manao asan-jiolahy mihitsy. Mifanohitra tanteraka amin’ny fitsipika sy ny fianianana nataon’izy ireny ny fanaovany asa ratsy. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany, ary tandroka aron’ny vozona izy ireny. Ankehitriny, azy lasa mpampihorohoro sy manafika ny olona indray aza. Tahaka ny ahoana ny fomba fisafidiana ny olona ho lasa mpitandro filaminana eto amintsika? Misy ifandraisany amin’izany.